Iyo yakazara uye dzakasiyana diski granulation yekugadzira tambo maitiro ndeimwe yeakakosha mabhenefiti eHenan Zheng Heavy Maindasitiri. Inogona kupa yakakwana uye yakavimbika yekugadzira mitsara mhinduro zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo nevatengi.
Isu tine ruzivo mukuronga uye nekushandira kwakasiyana mitsara yekugadzira manyowa. Isu hatisi kungo tarisa pane ese maitiro ekubatanidza mune yekugadzira maitiro, asi zvakare gara uchinzwisisa iyo yega yega maitiro pane ese ekugadzira tambo uye kubudirira kubudirira kupindirana.
Mutsara wekugadzira we disk granulator unonyanya kushandiswa kugadzira fetereza. Organic fetiraiza inogona kugadzirwa yemombe uye yehuku manyowa, zvekurima marara uye yemasipare yakasimba solid Tsvina yemanyowa iyi inoda kumwe kugadziriswa isati yashandurwa kuita mafotereza ekushambadzira ehupfumi hwekutengesa. Iko kudyara mukushandura marara kuita hupfumi kwakakosha chose.
Disc granulated organic fetiraiza yekugadzira mutsara yakakodzera kune:
►Kugadzira ndove yemombe fetiraiza
►Kugadzira yenguruve mupfudze
►Kugadzira huku uye dhadha mupfudze wehupenyu
►Makwai manyowa anogadzira fetiraiza kugadzira
►Organic fetiraiza kugadzirwa kwemaguta sludge
1. manyowa emhuka: mupfudze wehuku, mupfudze wenguruve, mupfudze wemakwai, mupfudze wemombe, mupfudze webhiza, manyowa etsuro, nezvimwe.
Iyo dhisiki granulation yekugadzira tambo yakafambira mberi, inoshanda uye inoshanda, iyo michina chimiro iri compact, iyo otomatiki yakakwira, uye mashandiro ari nyore, ayo ari nyore kugadzirwa kwakawanda kweiyo organic fetiraiza.
1. Corrosion-resistant and wear-resistant materials zvinoshandiswa mune zvese zvigadzirwa tambo michina. Hapana matatu marara emhepo, kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza. Inomhanya zvishoma uye iri nyore kuitisa.
2. Kugadzira kugona kunogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Marongerwo eiyo yose yekugadzira tambo inoenderana, yesainzi uye inonzwisisika, uye tekinoroji iri kumberi.
Dhisiki granulation yekugadzira mutsetse michina inosanganisira zvigadzirwa mudura → blender (sirring) → disk granulation muchina (granulator) → roller roller sieve muchina (kusiyanisa zvigadzirwa zvepasi kubva kune apedza zvigadzirwa) → yakatwasuka cheni crusher (kutyora) → otomatiki kuputira muchina (kurongedza) → bhandi conveyor ( kubatanidza kune akasiyana maitiro).
Ongorora: iyi tambo yekugadzira ndeye yekureva chete.
Iyo yekuyerera kuyerera kwedhisiki granulation yekugadzira tambo inogona kazhinji kukamurwa kuita
Strict mbishi zvinhu reshiyo anogona nechokwadi mukuru fetiraiza kunyatsoshanda. Mbishi zvigadzirwa zvinosanganisa tsvina yemhuka, michero yakaora, maganda, miriwo mbishi, fetiraiza yakasvibira, fetiraiza yegungwa, fetiraiza yepurazi, marara matatu, zvidiki uye zvimwe zvakasvibisa marara zvigadzirwa.
Iyo diski kona yeiyo disk granulation muchina inotora arc chimiro, uye bhora rinoumba chiyero rinogona kusvika zvinopfuura 93%. Mushure mokunge zvinhu zvapinda mukapu yegranulation, kuburikidza nekuenderera kutenderera kweiyo granulation diski uye mudziyo wechipfapfaidzo, izvo zvinhu zvakasungwa zvakasungwa pamwechete kuti zvibudise zvidimbu zvine yunifomu chimiro uye yakanaka chimiro.
Kupakata ndiyo yekupedzisira maitiro e organic fetiraiza yekugadzira mutsara. Chigadzirwa chakapedzwa chakarongedzwa neine zvakakwana otomatiki huwandu hwekupakata muchina. Iyo yakakwira degree of otomatiki uye yakanyanya kushanda kwete chete kuti uwane chaiyo kuyerwa, asi zvakare zvakaisvonaka kupedzisa yekupedzisira maitiro. Vashandisi vanogona kudzora iyo yekumhanyisa kumhanyisa uye kumisikidza iyo yekumhanyisa parameter zvinoenderana nezvinodiwa chaiko.